Wadahadalka Daroogada Ayaa Soo Nooleynaya Dooda Siyaasada Daroogada • Dawooyinka Inc.eu
Maanta DrugsDialoog.nl ayaa la bilaabay, oo ah barxad lagu saleeyo qiyaas cusub bil kasta oo la xiriirta siyaasadda daroogada ee hadda ka jirta Nederland. Soo-booqdaha goobta waxaa la siiyay fursad uu ku qiimeeyo cabirka oo uu isbarbar dhigo guddi khubaro ah. Drugsdialoog.nl waxay xirxirtaa dhamaan qiimeynta iyo doodaha kadibna waxay wadahadal la gelaysaa dowlada hoose iyo tan qaran. Qiyaasta ugu horeysa ee la qiimeynayo ayaa ah: miyay tahay in dukaamada kafeega laga ilaaliyo dalxiisayaasha ajaanibta ah si loola dagaallamo dalxiiska daroogada?
Bil kasta waa daaran tahay DaroogooyinkaDialoog.nl dhigay qiyaas cusub. Taageerayaasha iyo kuwa ka soo horjeeda siyaasada daroogada ee hada jirta waxaa lagu casuumay inay qiimeeyaan cabirkan iyadoo lagu saleynayo shan qodob: caafimaadka bulshada, dambiyada, dhaqaalaha, deegaanka iyo muuqaalka Nederland ee dibada. Guddi joogto ah oo ku xeel dheer khabiirada siyaasadda daroogada ayaa qayb ka ah barnaamijka. Kaqeybgalayaashu waxay isbarbar dhigi karaan fikradooda iyo fikirka kooxda khabiirka ah, waxay kudadaali karaan doodaha dadka kale waxaana macquul ah inay dib u eegaan ra'yigooda iyagoo ku saleynaya tan.
Qiyaasta ugu horreysa hadda waa khadka tooska ah: 'Dukaamada qaxwada waa inay ka celiyaan dalxiisayaasha ajnebiga ah si loola dagaallamo dalxiiska daroogada'. Tom Blickman oo ka tirsan machadka Transnational Institute ayaa ka walaacsan caafimaadka dalxiisayaasha wuxuuna rajaynayaa in "dalxiisayaal badan ay dhibaato kala kulmi doonaan daroogada waddooyinka, mararka qaarna ay ka dhalan doonaan cawaaqib xumo. Machteld Busz, agaasimaha Mainline, wuxuu inta badan arkaa siyaasad is khilaafsan. "Dambiyada abaabulan ayaa ka faa'iideysanaya tanina waxay wiiqeysaa tijaabooyinka hadda la socda ee ah weed dawladeed, oo runtii isku dayaya inay wax soo saarka ka saaraan wareegga sharci darrada ah. August de Loor oo ka tirsan Stichting Adviesburo Drugs ayaa sidoo kale tilmaamaya is burinta: “Qeyb ka mid ah isticmaalka daroogada jilicsan ayaa u guureysa goobta dadweynaha. Tani waxay wiiqaysaa siyaasada ka hortagga daroogada jilicsan ee dhalinyarada. ” Ton Tonben, oo ah cilmi baare daroogada oo ka tirsan jaamacada Amsterdam ee cilmiga sayniska, ayaa rajaynaya in arintani noqon doonto "mid layaableh dadka deegaanka iyo dabaqadda dhexe ee bartamaha magaalada iyadoo lala xiriirinayo kororka qarxa ee iibka dariiqyada xashiishadda (iyo daroogooyinka kale) ee iibsadayaasha mustaqbalka."
Drugsdialoog.nl waxay xirxirtaa dhammaan qiimeynta iyo doodaha ka dibna waxay wadahadal la gelaysaa dowladda hoose iyo tan qaran ee ku saabsan tallaabooyinkan. Sidan oo kale, waxay hubiyaan in fikradaha ku jira barxadda ay ku lug leeyihiin siyaasadda daroogada Nederland.
Ku Saabsan Wadahadalka Daroogada
Daloog wuxuu rabaa inuu dhiirrigeliyo wadahadal macquul ah oo ku saabsan siyaasadda daroogada. Wadahadal ku saleysan xaqiiqda halkii laga eegi lahaa. In kasta oo sannado cadaadis iyo dhaqan gelin ah, haddana daroogooyinka ayaa ka jaban oo si fudud loo heli karo weligood. DaroogDialoog waa hindise ah mr Kaj Hollemans (KH Talooyin Sharci), Gjalt-Jorn Peters (Kaaliyaha Professor, Kulliyadda Cilmu-nafsiga, Jaamacadda Furan) iyo Willem Scholten (Willem Scholten Consultancy). Mashruucan cusub, waxay rabaan inay ka sarreeyaan dooda dawooyinka mid ka sareysa 'haa-maya' oo ku saabsan in daroogada la sharciyeeyo ama la mamnuuco. Waxaa jira khataro la xiriira daroogada iyo isticmaalka daroogada, laakiin mamnuucida ma xalinayso dhibaatooyinka oo dhan. Taasi waa sababta aan ugu baahan nahay inaan ka hadalno waxyaabaha kale ee lagu beddeli karo. Bilow wadahadalka.
DrugsInc waxay lashaqeysaa Kaj Hollemans dhanka siyaasada daroogada. Halkan ka akhriso tiirarkiisa fiiqan.
Nederland waxay isu diyaarineysaa tijaabada dhirta
Dowladda Nederland waxay aqbali doontaa codsiyada kuwa wax soosaara ee tijaabada xashiishka bisha Luulyo. Laga soo bilaabo 1 ...
Guddiga Kongareeska Mareykanka ayaa meel mariyey sharci qeexaya xashiishadda heer federaal
Saamiyada shirkadaha xashiishka ayaa kordhay khamiistii kadib markii guddiga congress-ka Mareykanka uu soo saaray sharci lagu xakamaynayo xashiishadda.